Mar Dhoof iyo Soonkii Qoraxdii Dhici Weyday | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dhibaatada Ay Leedahay Cabista Sigaarka
Ilhaan Ciise Maxamed, April 7, 2018
Waxaan ahayn arday badan oo qaarba loo diray iney cilmi gaar ah soo bartaan. Waxaa lagu jiray bil Ramadaan oo inteedii badnayd aan ku soonnay dalka, waxaan ka soo dhoofnay Muqdisho xilli habeen ah, abbaarihii 7:30 fiidnimo innagoo sii raacnay dayaaradda Aeroflot ee Raashkku leeyahay. Markii aan gaarnay magaalada Moosko ee caasimadda Ruushka ayaa nala kala qaybiyay oo arday walba jaamacaddii iyo gobolkii lagu soo qoray uu toos u sii aaday.
Intii aan waddada sii soconnay markii uu tareenku istaago meelaha loogu talagalay si ay dadku qaarna u degaan qaarna u soo fuulaan waxaan la kulmaayay dad u badan haweenka oo la soo istaaga daaqadaha tareenka iyo irdahooda miraha iyo khudaar caynba cayn ah sida tufaaxa, saytuunka iyo canabka iyo waxyaabo kale oo badan. Taas waxay i soo xasuusineysay markii aan ku safarno waddada Afgooye ee Soomaaliya oo markii gawaarida istaagaan boosteejooyinka la soo hoos carara dhallinyaro gabdho iyo wiilal ah oo gacmaha ku sida liin-bambeelmada, mooska, saytuunka, cambaha, sabuulka, looska iyo waxyaabo kaloo badan.
Safarkaas dheer kaddib, waxaan soo gaarnay magaaladii Odessa ee waxbarashadeenna. Waa waddan horumarsan oo wax walba diyaarsan yihiin, isla markiiba waxaa nalooku yimid halkii tareenka oo nalaku sugaayay, waxaa nala dajiyay meeshii nalooku talgalay. Waxaa lagu jiraa bishii barakaysnayd ee Ramadaan, intii hore waxaan soo ahayn safar oo waxaa noo bannaanaa inaan iska afurno, haddase waxaan nimid meeshii aan dagi lahayn, waxaan noqoneynaa dad deggan oo magaalada jooga, waana in meeshaa laga sii wadaa Soonkeennii oo lagu jiro tobankii dambe. Wax fikrad ah oo aan ka haystay Soon lagu soomaa Raashiya amaba debadda oo dhan ma jiro, mana naqaan qaabka iyo waqtiga la soomo iyo saacadaha midna.
Wuxuu ka mid ahaa Cabduqaadir Saxafiyiintii sida weyn ula shaqeeyay dowladdii kacaanka.
Tags: Mar Dhoof iyo Soonkii Qoraxdii Dhici Weyday
Next post Xidhiidhka Afkaarta iyo Bay'adda
Previous post Waxay tiri "Cudurka dibirada wuxuu iga dhigay sida in aan uur leeyahay Markasta"